18+ Ranon-dra mieritreritra C izay tsy hay hadinoina - Hafa
18+ Ranon-dra mieritreritra C izay tsy hay hadinoina
Teny nalaina ny ra C nalaina tamin'ny endri-tsoratra:
Ra C dia kinova hafa amin'ny 'Blood +', ary novokarin'ny Production I.G. Studio mitovy amin'ny Psycho Pass.
Raha ny vampira sy ny mistery no anao, toa ny Blood +, dia mendrika ny andrana izany.
Raha efa nijery ny sarimiaina ianao - ireto misy teny tsara indrindra tokony hotadidinao.
1. Tadayoshi Kisaragi Quotes
'Faly aho fa afaka niaraka izahay. Tsy lainga izany, ka izany no mampanaintaina azy. ' - Tadayoshi Kisaragi
2. Teny nanahara nifoka
“Inona no mety hitranga raha avelantsika toy ny misy azy ireo ireo ary manova ny toerana nahaterahanao, ny manodidina anao na ny fahatsiarovana anao akory aza? Raha novainay izy rehetra, mbola hijanona ho toy ny taloha ihany ve ianao? ” - Fumito Nanahara
'Tsy miraharaha izay zavatra ety ivelany izahay, fa te-hifantoka amin'izay antsoin'ny olona ankehitriny ny ao anatiny, azonao atao koa ny miantso azy io ho natiora. Ataoko angamba fa teraka toy izao ianao na nitombo mba hanao toy izao. ' - Fumito Nanahara
'Tsy miraharaha ny olombelona ianao, sa tsy izany? Tsy mitovy aminao izy ireo, ary tsy afaka mihinana azy ireo fotsiny ianao. Nahazo hevitra ianao fa tsy hanome sakafo ny zanak'olombelona avy amin'ny tolo-kevitra ara-tsaina. ” - Fumito Nanahara
'Saya, tsy olombelona ianao, kanefa manana vatan'olombelona. Ny herinao ve avy amin'ny tsy maha-olombelona anao? Sa avy amin'ny fiainana niainanao izany? Te hahafantatra aho, tiako ianao Saya. ” - Fumito Nanahara
“Na izany aza, minoa na tsia, arakaraka ny hieritreretanao azy dia vao mainka miala amin'ny zava-misy izany. Marina izany, mety hiteraka olana ny fisainana. Ny fahatsapan'ny olona iray dia ny mitady ny tena valiny. ' - Fumito Nanahara
'Miova ny olona, ​​marina izany. Na izany aza, misy zavatra azo ovaina, ary zavatra tsy afaka miova. Tsy miova mihitsy ny fototra, raha tokony hiova ireo, mbola hijanona ho toy izany ihany ve ny olona? ” - Fumito Nanahara
“Mila valisoa ho an'ny mpandresy koa isika ary sazy ho an'ny resy. Lazao, raha afaka mandresy ianao, inona no tadiavinao? Raha resy ianao, inona no halaina aminao ka miteraka fijaliana ratsy noho ny fahafatesana? ” - Fumito Nanahara
'Marina izany, nampanantena ianao. Azonao atao ve ny mitazona izany fampanantenanao izany hatramin'ny farany? Sa tapahinao ny handrava azy? Miankina aminao Saya ny zava-drehetra. ” - Fumito Nanahara
'Tsia, tsia aho, matahotra ny tenako aho. Fa ny sasany matahotra izany fahefana izany, ary izany no mahatonga azy ireo maniry mafy ny hahazo izany. Nisy nanontany ahy raha afaka manampy amin'ny fampiasana ny Shujikimen aho. ” - Fumito Nanahara
“Eny, nampanantena ianao. Ilaina ity fampanantenantsika ity mba hanandramantsika izay nanapahantsika hevitra. Ary koa, mila manomana fanomanana hafa isika amin'ny fanandramana. Ny andrana dia hampiseho hoe iza amintsika no marina. ” - Fumito Nanahara
3. Kanako Tsutsutori Quotes
“Fantatrao ve fa miafina ao anatin'ireo tononkalo ireo karazana ankamantatra rehetra? Tsy tononkalo fitiavana adala fotsiny izy ireo. Ny karazana tantara miafina rehetra momba ny hetsika hafahafa dia tafiditra ao anaty tononkalo. ” - Kanako Tsutsutori
'Nahaliana ahy foana ny tantaram-pitiavana sy ny angano taloha, saingy tsy nanam-potoana hijerena azy amin'ny antsipiriany aho. Izany no antony nahatongavako teto, mba hizaha zavatra tena misy. ” - Kanako Tsutsutori
'Rehefa liana amin'ny zavatra iray aho dia tsy afaka mijanona irery. Toy izany foana aho. ' - Kanako Tsutsutori
4. Alika teny notsongaina
“Inona no maharary? Ny atidohanao ve no tsy mieritreritra, sa ny vatanao tsy mahatsapa? Angamba ny fonao koa? Mivoatra be ankehitriny ny raharaha, manakaiky ny farany. Iza no nampanantenainao? Ary iza koa ianao? ” - Alika
“Talohan'ny nisamborana anao dia izao no fanirianao Saya: Te ho tonga tahaka ahy aho. Na dia nomeko anao aza izany fanirianao izany, tsy fotoana tokony hanaovanao ny nofinao manaraka, Saya? ' - Alika
“Matetika ny ratsy fanahy dia tsy mandany fotoana any ivelany. Afaka manafina tena izy ireo. ' - Alika
“Mba hahatanteraka ny fanirianao dia mila mandoa vola ianao. Ny vidiny dia tokony hifanaraka amin'ny fanirianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy manana safidy firy ianao. ' - Alika
Angon-drakitra iray amin'ny ra be indrindra + Teny nalaina ho an'ireo mpankafy Anime mahatsiravina
Andiany iray amin'ireo fividianana Anime tsara indrindra avy amin'i Shiki momba ny famoizam-po
ny seho anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
andian-dahatsoratra anime folo ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra